Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / In cid loo shaqeeyo
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 10 2018
Marka aad cid uu shaqeeyo waxaa muhiim ah in aad ku fakarta xuquuqda aad ku lee dahay iyo waajibaadka ka saaran dhanka shaqo dhiibaha. Inta ayaa ka akhrisan kartaa waxyaalaha muhiimka uu ah in aad taqaano marka lagu shaqaaleeyo.
Tusaalaha shaqaaleeynta mudo xadidan leh:
Waxaa jiro nuucyo kala duwan oo shaqaaleeyn mudo xadidan leh.
Shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud (Allmän visstidsanställning)
Shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud mecnaheed waa in aad cid uu shaqeeyneeysid laga bilaabo taarikh ilaa taarikh kale ama in aad mudo ka shaqeeyso si aad uga shaqeeyo hoowl gaar ah. Tusaale ahaan shaqaaleeyn mudo xadidan leh waxeey ahaan kartaa in aad mudo xadidan ka shaqeeyso mashruuc, adigoo uu shaqeeleeysan mashruuca. Waxaad shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud heli kartaa marka uu shaqo dhiibaha ku soo waco oo aad mushaar uu qaadaneeysid saacada aad shaqeeysid. Marmarka qarkood waxaa loo yaqaan shaqaleeynta-saacadeed.
Haddii aad marar ku lahaatay shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud isla hal shaqo dhiibe, waxaa sharci ahaan marka loo fiiriyo, xaq uu yeelan kartaa shaqaaleeyn joogto ah. Waxeey khuseeysaa haddii aad, mudo shan sano gudahood ah, marka la isku daro uu shaqeeysas shaqo dhiibaha in ka badan labo sano. Waxee shaqaaleeyntaada isku badaleeysaa markaas mid joogto ah. Taasi mecnaheed waa in la tixraaco qaanuunka difaaca shaqaaleeynta. Arintaas waxeey ku qoran tahay sharciga difaaca shaqaaleeynta, LAS.
Lacag ayaad bedelka fasaxa heli kartaa haddii aad shaqo dhameysid isla markaana aadan lasoo bixi karin fasax. Markaas waxaa lagu siinayaa lacag u dhiganta boqolkiiba laba iyo toban mushaarka aad sanadka oo dhan soo qaadatay.
Haddi aad jirato inta aad shaqeeyneeysid
Haddi aad shaqaaleeysan tahay oo aad jirato waxaad uga warameeysaa shaqo dhiibahaada maalinta koobaad aad jiratid. Shaqaalaha waxuu dhiibaa mushaarka jirada 14ka maalmood ee ugu horeeyo. Maalinta koobaad ee jirada waa maalinta sugida (karensdag). Mecnaheed waa in uu san malintaas heleeyn wax mushaar ah. Laga bilaabaa maalinta labaad ee aad jirata waxaad mushaarkaada lagaa siinaa boqolkiiba 80. Haddii aad shaqada uga maqan tahay jiro awgeed in ka badan todobo maalmood waa in aad cadeeyn jiro ka keentaa dhakhtar haddii uu mushaarka jirada kuu soconaayo. Waxaa loo yaqaan cadeeynta dhakhtarka (gundhiga daawadeed).